Lahaystayaal la siidaayay - BBC Somali
Lahaystayaal la siidaayay
Image caption Qaar ka mid ah kormeerayaashii lahaystay
Toddobo qof oo kormeerayaal caalamiga ah iyo shan qof oo u dalatay dalka Ukraine oo siddeed maalmood ka hor ay koox fallaaga ah oo daacadda u ah Ruushka ay bariga dalka Ukraine ku qabsadeen ayaa la sii daayay.
Hoggaamiyaha fallaagadani daacadda u ah Ruushka Vya-ches-lav Pono-maryov oo ku sugan magaalada Slavyansk ayaa ku tilmaamay kooxdani ka socota ururka ammaanka iyo is-kaashiga reer Yurub martidiisa, isla markaana la sii daayay iyada oo aan wax shuruud ah lagu xirin.
Ruushka ayaa cadaadis ku saabsan sii deynta kooxdani waxa uu kala kulmayay waddamada reer galbeedka, si loo qaboojiya xiisadda ka taagan bariga dalka Ukraine.
Weriya ka tirsan BBC-da oo ku sugan gobolkaasi ayaa sheegaya in sii deynta raggani uu qayb ka qaatay ergayga Ruushka Vladimir Lukin.
Kol hore, Booliska magaalada ku taala koonfur galbeed dalka Ukraine ayaa haatan sheegaya in 42 qof ay ku dhinteen isku dhacyo dhex maray jimcihii dowladda iyo taageerayaasha fallaagada daacadda u ah dalka Ruushka oo gooni u goosadka ah.
Waxaa la sheegayaa dadka dhintay ay ubadan yihiin fallaagada oo ku xanibmay dhismo dab la qabadsiiyay.